ọrụ ọrụ - Ule oru nke China, Akuko
Chọgharịa site na: Ihe niile
Gịnị bụ Nkwupụta GOST-R? Nkwupụta GOST-R nke Mmekọrịta bụ akwụkwọ nkwupụta iji gosipụta na a na-agbaso ngwaahịa iwu nchekwa Russia. Mgbe enyere iwu nke ngwaahịa na asambodo nke Russian Federation na 1995, usoro asambodo ngwaahịa mmanye malitere na Russia. Ọ chọrọ ngwaahịa niile erere n'ahịa Russia ka e bipụta ya na akara asambodo GOST. Dịka otu n'ime usoro nke asambodo nnabata iwu, Gost-R Nkwupụta nke Conformi ...
Gịnị bụ cTUVus & ETL CERTIFICATION? OSHA (Ọrụ Uche na Ahụike), nke metụtara US DOL (Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ), na-achọ ka ngwaahịa niile a ga-eji rụọ ọrụ ga-anwale ma gbaa NRTL asambodo tupu ere ya n'ahịa. Testingkpụrụ nnwale dị mma gụnyere ụkpụrụ American National Standards Institute (ANSI); Societykpụrụ American Society maka Ule (ASTM), ụkpụrụ n'okpuru Laboratory (UL), yana ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịtọhapụ ụlọ ọrụ ...
Gịnị bụ ndekọ WERCSmart? WERCSmart bụ ndebiri nke Standard Environmental Regulatory Compliance Standard. WERCSmart bụ ụlọ ọrụ ndebanye ndebanye aha ngwaahịa nke ụlọ ọrụ US akpọrọ Wercs mepụtara. Ebumnuche ya inye nchekwa nchekwa ngwaahịa maka nnukwu ụlọ ahịa na US na Canada, wee mee ka ịzụta ngwaahịa dị mfe. Na usoro nke ire, ibugharị, ịchekwa na ikpofu ngwaahịa n'etiti ndị na-ere ahịa na ndị nnata aha, ngwaahịa ga-enwewanye co ...
Gịnị bụ asambodo CE? Akara CE bụ "paspọtụ" maka ngwaahịa ịbanye n'ahịa EU na mba EU na-ere ahịa na Free Trade Association. Ngwaahịa ọ bụla ekwuru (nke metụtara usoro iwu ọhụụ), ma arụpụtara ya na mpụga EU ma ọ bụ na mba ndị so na EU, iji kesaa n'ahịa EU kpamkpam, ha ga-erubere iwu chọrọ nke ụkpụrụ na usoro kwekọrọ ekwekọ tupu etinyere n'ahịa EU, ma tinye akara CE. Nke a bụ ...
Overkpụrụ Nleba anya na Usoro Asambodo Akwụkwọ Asambodo: GB31241-2014: mkpụrụ ndụ ion lithium na batrị ejiri na ngwa eletriki a na-ebugharị ― Akwụkwọ nchekwa asambodo: CQC11-464112-2015: Akwụkwọ Secondary Battery na Battery Pack Safety Asambodo Iwu maka Portable Electronic Devices Background and Ofbọchị mmejuputa 1. GB31241-2014 e bipụtara na December 5th, 2014; 2. GB31241-2014 e mandatorily emejuputa atumatu na August 1st, 2015.; 3. Na October 1 ...
Gịnị bụ ANATEL Homologation? ANATEL bụ obere oge maka Agencia Nacional de Telecomunicacoes nke bụ ikike gọọmentị Brazil nyere ngwaahịa nkwukọrịta enyere maka asambodo mmanye na afọ ofufo. Nkwenye ya na usoro nnabata ya bụ otu maka ngwaahịa ụlọ Brazil na nke mba ofesi. Ọ bụrụ na ngwaahịa dị na asambodo mmanye, nyocha na nyocha ga-adakọrịrị na iwu na ụkpụrụ akọwapụtara dị ka ANATEL rịọrọ. Akwụkwọ ngwaahịa ...
Kedu ihe bụ asambodo TISI? TISI dị mkpụmkpụ maka ụlọ ọrụ Thai Industrial Standards Institute, nke jikọrọ aka na Ngalaba Mmepụta Thailand. TISI bụ ọrụ maka ịhazi ụkpụrụ ụlọ yana isonye n'usoro iwu mba ụwa ma na-ahụ maka ngwaahịa na usoro nyocha ruru eru iji hụ na usoro nnabata na nnabata. TISI bụ ụlọ ọrụ gọọmentị nyere ikike ịnwe ikike maka asambodo mmanye na Thailand. Ọ bụkwa ọrụ maka ...
Gịnị bụ Asambodo PSE? PSE (Nchedo Ngwaahịa nke Ngwaọrụ Eletrọniki & Ihe) bụ sistemụ asambodo amanyere na Japan. A na-akpọkwa ya 'Nnyocha Nnabata' nke ọ bụ usoro ịnweta ahịa ahịa maka ngwa eletriki. Asambodo PSE nwere akụkụ abụọ: EMC na nchekwa ngwaahịa yana ọ bụkwa ụkpụrụ dị mkpa nke iwu nchekwa Japan maka ngwa eletriki. Certification Standard maka batrị lithium Nkọwa maka METI Iwu maka Nka na ụzụ ...
Gịnị bụ KC? Kemgbe 25th Ọgọstụ, 2008 ， Korea Ministry of Knowledge Economy (MKE) kwupụtara na Kọmitii Na-ahụ Maka Ihe Nleba Ọchịchị ga-eduzi akara ngosi nnabata mba ọhụrụ - aha ya bụ akara KC dochie Asambodo Korea n'oge dị n'etiti Jul. 2009 na Dec. 2010. Usoro asambodo nchekwa (KC Asambodo) bu iwu nkwenye nchedo nke onwe ya dika usoro iwu Nchedo ngwa oru eletriki, atumatu nke kwadoro ...
BSMI Okwu Mmalite nke BSMI asambodo BSMI dị mkpụmkpụ maka Bureau of Standards, Metrology and Nnyocha, nke hibere na 1930 ma kpọọ ya National Metrology Bureau n'oge ahụ. Ọ bụ nzukọ nyocha kachasị na Republic of China na-ahụ maka ọrụ na ụkpụrụ mba, metrology na nyocha ngwaahịa wdg. Standardskpụrụ nyocha nke ngwa eletriki na Taiwan bụ BSMI gosipụtara. Enyere ikike iji akara BSMI na ọnọdụ ha nọ na c ...
Gịnị bụ Asambodo CB？ IECEE CB bụ ezigbo usoro izizi mba ụwa maka inyocha akụkọ gbasara akụrụngwa eletriki. NCB (Ngalaba Asambodo Mba) ruru nkwekorita nke otutu, nke na enyere ndi oru aka inweta asambodo mba site na ndi otu ndi ozo n’okpuru atumatu CB na-ebufe otu asambodo NCB. Akwụkwọ CB bụ akwụkwọ atụmatụ iwu CB nke enyere NCB ikike, nke bụ ịkọrọ ndị ọzọ NCB na pr ...
Kedu ihe bụ CTIA CERTIFICATION? CTIA, ndebiri nke Cellular Telekomunikashions na Internet Association, bụ ụlọ ọrụ na-abụghị nke na-abaghị uru guzobere na 1984 maka ebumnuche nke ịba uru maka ndị ọrụ, ndị nrụpụta na ndị ọrụ. CTIA nwere ndị ọrụ US niile na ndị nrụpụta sitere na ọrụ redio mobile, yana site na ọrụ data na ngwaahịa ikuku. Ndị FCC (Federal Communications Commission) na Congress kwadoro, CTIA na-arụ nnukwu ọrụ na ọrụ t ...